Iindaba-Aluminiyam Extrusion Dies FAQs
Masiqale ngentshayelelo emfutshane kwiinzuzo ze-aluminium extrusion.
I-aluminiyam yi-1/3 yobuninzi bentsimbi, eyenza i-aluminiyam ibe lolona khetho lubalaseleyo kwiinkqubo ezininzi ezinxulumene nentshukumo.Inzuzo yecandelo le-aluminiyam ekhutshiweyo kukuba ibeka izinto kuphela apho zifuneka khona, ezinokuthi zinciphise ubunzima kunye neendleko.
Ialuminiyam inomlinganiselo ophezulu wokuqina wobunzima kunezinye izinto ezininzi.Ngokomzekelo, i-aluminium ye-6061-T6 ye-aluminiyam iphantse yaphindwe kane amandla e-304-steel-steel;eyenza i-aluminium ekhutshiweyo ibe yinto efanelekileyo kwizicelo zokuthwala umthwalo, apho ukunciphisa ubunzima kubalulekile.
Xa i-Iron i-oxidize iya kuhlwa kwaye ivuthe, kodwa xa i-aluminiyam i-oxidize yenza ifilimu ekhuselayo phezu komhlaba.Oko kunokonga kwiindleko zeenkqubo zokugquma kwaye kuphelise ukugcinwa xa kungekho mfuneko yokugqitywa kwezithambiso eziphezulu.
Kulula ukusebenza nayo
Uninzi lwamabakala omatshini we-aluminium ngokulula.Unokuyisika i-aluminium extrusion ubude nge-hacksaw kwaye ubhobhoze imingxuma nge-drill yakho engenazintambo.Ukusebenzisa i-aluminium extrusions ngaphezu kwezinye izinto kunokugcina ukuguga kunye nokukrazula koomatshini bakho kunye nezixhobo.
Iinketho ezininzi zokugqiba
I-aluminiyam eyongeziweyo inokupeyintwa, ifakwe ipleyiti, ipolishwe, yenziwe i-anodized.Oku kukunika inkitha yeenketho onokukhetha kuzo kunokuba kunokwenzeka ngezinye izinto.
Kukho ixabiso lemarike ye-aluminiyam elahlekileyo.Oko kuthetha ukuba xa imveliso yakho ifikelela esiphelweni somjikelo wobomi bayo akukho miba ngokulahla izinto ezingafunwayo.
Izixhobo ezingabizi kakhulu
Xa abaqulunqi becinga ngokusebenzisa i-aluminiyam ekhutshiweyo, baya kuhlala bezithintele kwiimilo ezikhoyo kwiikhathalogu zeemveliso eziqhelekileyo.Elo inokuba lithuba eliphosiweyo lokwenziwa koyilo, kuba isixhobo se-extrusion yesiko siyabiza ngokumangalisayo.
Umbuzo: Lithini ixabiso lokufa?
A: Akukho xabiso limiselweyo lokufa.Ngokusekwe kwi-custolizations kubandakanya ubungakanani, imilo kunye nokugqiba, siya kunika ixabiso elifanelekileyo.
Umbuzo: Yintoni ubomi bokufa kwe-extrusion?/ Ingaba i-extrusion ifa ixesha elingakanani?
A: Siyila iifa ukulawula ubushushu kunye noxinzelelo olungalinganiyo, olucothisa isantya se-extrusion kunye nokwandisa ubomi bokufa.Ekugqibeleni, ukufa kuya kufuneka kutshintshwe, kodwa sithatha iindleko zokutshintshwa kweefa.
Umbuzo: Ngaba unokusebenzisa iifa ezikhoyo kwezinye iiprofayili zeprofayile?
A: Ngokuxhomekeke kwisicelo sakho esithile, sinikezela ngokufa okusemgangathweni.Ukuba sinokufa okusemgangathweni ohambelana nemfuno yakho, siya kukuthumelela ushicilelo lweprofayile ukuze uhlole.Ukuba iyasebenza kwisicelo sakho, siya kukusebenzela yona.
Ukuthenga nokuodola ii-FAQs
Umbuzo: Ngaba unokusika ii-extrusions kubude obuchaziweyo ngaphambi kokuba uzithumele ngenqanawa?
A: Sisebenzisa iintlobo ngeentlobo zeenkqubo kunye nobuchule bokumisela i-aluminiyam extrusions ngendlela yokusika, ukugoba, ukudiliza, ukuwelda, umatshini kunye nokwenza ukudibanisa imveliso yakho yokugqibela.
Umbuzo: Ngowuphi ubungakanani obuncinane bomyalelo?
A: Ngokuqhelekileyo, ubungakanani obuncinci bomyalelo ngaphandle kweentlawulo ezimiselweyo yi-1,000 yeponti nganye yokusila.
Umbuzo: Zeziphi iindlela zokupakisha ozinikezelayo?
IMPENDULO: Sisebenzisa iindidi ngeendidi zokupakishwa okusemgangathweni kunye nesiko ukuthumela iodolo yakho nangayiphi na indlela ofuna ngayo, ukusuka kwingxowa engenanto ukuya kumakhreyithi avaliweyo, akhuselekileyo.
Ixesha lokuposa: Jun-04-2021